Mavericks OS egijima ku kakade 40 abangamaphesenti angu-Apple Macs - Izindaba Rule
Mavericks OS egijima ku kakade 40 abangamaphesenti angu-Apple Macs
Apple OS X Mavericks operating system (THE) manje ugijima on 40 abangamaphesenti angu-Macs, umbiko kusuka izikhangiso online inethiwekhi Chitika usedalule.
The ngokuqinile wambuka amashumi ezigidi OS X-based ad okuvelayo inethiwekhi yayo phakathi 17 Mashi futhi 23 Mashi kuya wafinyelela kuleso siphetho, ethi zonke izinguqulo atholakalayo of Apple isofthiwe Mac, kuhlanganise izinguqulo ezindala like Mac OS X 10.8 Mountain Lion and Mac OS X 10.7 Lion, 40 abangamaphesenti angu-web traffic yafika ivela Mac OS X 10.9 Mavericks.
Apple Mavericks ezamukelwe ngu 40 abangamaphesenti angu-bonke abasebenzisi Mac
Apple ezikhishwe yayo Mac OS X 10.9 Mavericks OS emva nje kwezinyanga ezinhlanu ezedlule kanti wamangaza abasebenzisi ngokwenza kube iyatholakala njengendlela khulula thwebula. Kungenzeka ukuthi ukuntuleka ithegi amanani unomthwalo impumelelo yayo ngesikhathi esincane kangaka.
Ngokuqhathanisa, iningi abasebenzisi Windows asebenzisa izinguqulo ezindala. Ngokusho February 2014 izibalo kusukela Izicelo Net, kuphela 11 abangamaphesenti angu-imishini OS Microsoft esebenzisa i-Windows 8, kanye 47 amaphesenti angu abasebenzisi besekela Windows 7 kanye ephezulu 30 abangamaphesenti angu ukunamathela Windows XP, okuyinto usuzoba engasekelwe.
Microsoft uye wazama uhla namaqhinga ukukholisa abasebenzisi XP uthuthukele newer Windows version, kuhlanganise nesixwayiso ukulondeka kwemiphumela emibi yokuvumela ababambelela uhlelo oneminyaka engu-12 ubudala futhi enikeza izaphulelo kuma new Windows hardware. Mhlawumbe okwenza OS uthuthukise nendlela khulula like Apple akwenzile, yiyona qhinga onomqondo more.
Apple futhi ukhiphe Mac OS X 10.9.1 buyekeza ngo-December kodwa ukuthi wehlulekile ukuletha lutho esijabulisayo, njengoba wanikela ikakhulu Ukulungiswa kwamaphutha ethehlsasi ezincane.
Mac OS X 10.9.1 baletha “ukwesekwa okuthuthukisiwe Gmail e OS X Mail, futhi kwamaphutha kubasebenzisi nge izilungiselelo Gmail” kanye ngcono ukuthembeka Smart amabhokisi emeyili ukucinga in Mail.
Isibuyekezo Mavericks futhi fixed inkinga ukuthi wayeka voiceover ngokufunda umusho eyayinegama emoji. Izincwajana zemininingwane kwamaphutha yayihlanganisa izibuyekezo iLife futhi iWork zokusebenza ngakho babeyoqhubeka ubuyekeze izinhlelo non-English, futhi ikhambi lwempikiswano nqanda igama thinta iqembu kusukela populating ikheli field. m
Lesi sihloko, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
20576	0 Mac, Macintosh, Maverick, Isistimu esebenzayo, OS X
← Imibhangqwana yongqingili ushada okokuqala eNgilandi naseWales Zuckerberg isebenza on drones WiFi for ezindaweni ezikude →